रेडलाईट एरियाका युवकले इमरान र सन्नीको छोरा भनेपछि बलिउडमा हंगामा ! – Sandesh Press
रेडलाईट एरियाका युवकले इमरान र सन्नीको छोरा भनेपछि बलिउडमा हंगामा !
December 13, 2020 150
बिहारको एक कलेजका विद्यार्थीले आफ्नो एडमिट कार्डमा बुवाको नाममा बलिउड अभिनेता इमरान हासमी र आमाको नाममा सन्नी लियोनी उल्लेख गरेका छन् । धनराज महतो डिग्री कलेजमा बीए दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत २० वर्षीय कुन्दन कुमारले सो दाबी गरेका हुन् ।
‘हामीले यस विषयमा छानबिन गर्न भनेका छौँ । यो पक्कै पनि विद्यार्थीको मजाक हो र यसका लागि उनी नै जिम्मवार देखिन्छन् । छानविनको रिपोर्टको आधारमा आवश्यक कारवाही गरिनेछ,’ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार राम कृष्ण ठाकुरले भने ।
बादशाओ चलचित्रका लागि एक आइटम गीतमा इमरान र सन्नीसँगै देखिएका थिए । त्यसयता उनीहरुले एकै चलचित्रमा काम गरेका छैनन् ।
Prevएलोभेरा प्रयोग गर्न नजान्दा बन्न सक्छ विष, ध्यान दिनै पर्छ यी कुरा
Nextमेरो दोस्रो विवाहलाई समाजले कसरी हेर्ला’ भन्दै श्वेताले गरेको प्रश्नमा करिश्माले दिइन् यस्तो मनछुने जवाफ
घर बनाउँदा यस्ता कुरामा सँधै ध्यान दिनुहोस्, सदा हुनेछ घरमा लक्ष्मीको बास
इलाममा खोला मा डुबेको भाइ लाइ बचाउन जादा